कोरोनाबाट निको भएका व्यक्तिबाट जुस खाएर १९ औं अनसन तोडे डा. केसीले - Everest Dainik - News from Nepal
कोरोनाबाट निको भएका व्यक्तिबाट जुस खाएर १९ औं अनसन तोडे डा. केसीले
काठमाडौँ — डा. गोविन्द केसीले २८औं दिनमा अनशत तोडेका छन् । शनिबार राति सरकारसँग भएको ८ बुँदे सहमतिपछि आइतबार बिहान डा. केसीले अनशन तोडेका हुन् ।
सरकारले वार्ता नगरी अनशन मात्र तोड्न आग्रह गरेको भन्दै चिकित्सक संघले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको थियो । सरकारसँग सहमति भएपछि भने चिकित्सक संघ र विभिन्न अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएका छन् ।
संयुक्त उम्मेदवारहरुलाई विजयी गराउन पाँच दलीय गठबन्धनको अपिल
लमहीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु, एकजना गम्भीर घाइते
कोरोनाले रोकियो प्रधानमन्त्रीको विवाह
केही स्थानमा वर्षा र हिमपात, यस्तो छ पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान